Wasiir Cawad oo Difaacay Go'aankii DF Kula Safatay Sucuudiga | SAHAN ONLINE
Wasiir Cawad oo Difaacay Go’aankii DF Kula Safatay Sucuudiga
MUQDISHO– Wasiirka arrimaha dibada dowladda federaalka oo ka hadlay go’aankii xukuumadiisu ay kula safatay boqortooyada Sucuudiga xiisada diblumaasiyadeed ee ka dhex oogantay Sucuudiga iyo wadanka Canada ayaa difaacay go’aankaasi
wasiirka oo waraysi siiyay BBC-da wuxuu sheegay in go’aankaasi uu ka yimid dhinaca madaxda federaalka
“Mowqifka dowladda waa sida ku cad war-saxaafadeedka. Sida aan dowlada Canada ugu taageeri lahayn inaanan la faro-gelin arrimaheeda gudaha, ayaan Sacuudiga ugu taageersan nahay inaanan iyagana la faro-gelin arrimahooda gudaha, waana kaas waxay taageertay DFS,” ayuu yiri.
wuxuu beeniyay in go’aanka ay qaateen lagu cadaadiyay , isaga oo xusay inuu yahay mid ay Madaxda federaalku ay u arkaan mid ay u madax banaan yihiin oo ku haboon xiisada.
“Ma jirto cid cadaadis nagu saartay go’aanka aan qaadanahay. Waxaa jiray xiisado kale oo cadaadis nagula saari lahaa hadii ay jiri lahayd cadaadis, marka dowlada Soomaaliyeed go’aamada ay qaadaneyso iyada ayaa u madax-banaan,” ayuu hadalkiisa kusii daray.
Dowladda federaalka ayaa lagu dhaliilay inay si indho la’aan ah u taageertay Sucuudiga, iyadoo eegin xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya Canada iyo Soomaaliya, Boqolaal kun ee qof ee Soomaaliyeed ee ku nool wadankaasi oo haysta dhalashad wadankaas.